Qiyaas, tusaale ahaan, sawirro, maqal, ama muuqaal fiidiyoow ah oo adeegsanaya teknolojiyad qoto dheer oo lagu dhisi karo siyaasi. Xitaa haddii loo aqoonsado inay tahay mid qoto-dheer, natiijada waxay ku socon kartaa xawaaraha warbaahinta bulshada si loogu maareeyo ra'yiga cod-bixiyeyaasha. Nasiib darrose, boqolkiiba tiro aad u badan oo codbixiyayaashu - in kasta oo ay yaryihiin - way rumaysan karaan.
Sida laga yaabo inaad ogaato, maamulayaasha iyo tikniyoolajiyadda ogaanshaha ayaa caan ku noqday isku dayga lagula dagaallamayo tikniyoolajiyadda qoto dheer. Shaki kuma jiro inay xiiso yeelanayso…
Warbaahinta la tarjumay - magacyadu waxay u adeegsan karaan saamileyaasha luuqadaha oo dhan. Halkan waxaa ah tusaale fantastik ah David Beckham - halkaasoo muuqaalkiisu soo jiidan doono dareenka, laakiin farriinta si habboon ayaa loo tarjumay. Xaaladdan oo kale, waxay u adeegsadaan codad kale iyo tiknoolajiyad qoto dheer dhaq-dhaqaaqa afka… laakiin sidoo kale waxay isticmaali lahaayeen qoto-dheer si ay ugu beddelaan codka.
Dhammaan tusaalooyinkaas, soo-qaadashada qoto-dheer uma jirto inay wax khiyaaneeyaan laakiin waa inay hagaajiyaan xiriirka. Waa xariiq khafiif ah… iyo ganacsiyada waa inay taxaddar ku socdaan!
Shaacinta: Waxaan u isticmaalayaa iskuxirahayga xiriirka App dib u eegis. Waxaan aad ugu boorinaayaa nooca la bixiyay oo bixiya tan tan oo warbaahin dheeri ah oo lagu qaldo.